Ukuqwalaselwa ngaphambi kokwehliswa ukusuka kwi-iOS 10 | IPhone iindaba
Ii-bets ze-iOS 10 sele zidlulile. Ngale nto, abasebenzisi abaninzi abangazange bayenze ngaphambili bayongezwa kufakelo lwale nkqubo yokusebenza ingazinzanga. Kwelinye icala, sinenani elilungileyo labasebenzisi abangalaziyo ixabiso lokuhlawula ukufaka i-beta yenkqubo yokusebenza, ke, sihlala sicebisa ukuba singafaki i-beta yayo nayiphi na inguqulelo ye-iOS xa isixhobo sakho se-iOS eyona iphambili okanye sesinye sezixhobo zakho zomsebenzi. Siza kushiya ezinye izinto ngaphambi kokwenza ukwehla kwi-iOS 10, Kuba njengokuba usazi kakuhle, ukuba udiniwe yi-iOS 10 okanye iingxaki zayo zozinzo, ungasoloko ubuyela kuhlobo lwamva nje lwe-iOS esayinwe yi-Apple.
Kuya kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezithile esingenakuzilibala, eyokuqala kukuba yiBeta, kwaye ngenxa yoko iya kuba neengxaki ezithile zomsebenzi. Iqela leendaba le-iPad lifakela zonke ii-betas ukugcina abafundi benolwazi, kodwa rhoqo, ukusebenzisa amagama ethu, kunokubonakala ngathi i-beta isebenza njengohlobo lwakutshanje olusebenzayo, xa ingasebenzi. Ke ngoko kuya kufuneka uthathe amanyathelo okhuseleko ngaphambi kokuzifaka. Ukuba awukwenzi, kwaye ngoku into oyifunayo kukubuyela umva ukusuka kwi-iOS 10 ukuya kuhlobo olusezantsi, gcina oku engqondweni:
Lumka ikopi zokugcinaNjengoko usazi kakuhle, i-backups ze-iOS 10 azizukuhambelana ne-iOS 9, ke kuya kufuneka ulumke xa usenza ugcino, Oko kukuthi, kufuneka ugcine indawo yogcino kwindawo engabhali ngaphezulu ugcino lwakho lwangaphambili lwe-9 10 (leyo Ndiyathemba ukuba wenze ngaphambi kokufaka i-iOS XNUMX, kuba kuphela kwayo onokuphinda uyifumane kwakhona). Oko kwathiwa, ndincoma ukuba wenze ikopi kwi-iTunes.
Kulungile ukwenza ifayile ye- Ukufakwa kwe-iOS 9 kugqityiwea, ukususela ekuqaleni, kwaye kamva siya kubuyisela i-backup ukuba sibona kuyimfuneko.
I-iPhone yakho okanye i-iPad kufuneka ibe ngaphezulu kwe- 50% ibhetri.
Indlela yokubuyela kwi-iOS 9.3 kwi-iOS 10
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela ingxelo yamva nje ye-iOS ehambelana nesixhobo esifuna ukusibuyisela okanye sisebenzise ifayile ye- ukuhlawula. Iphepha endilithandayo lokukhuphela inkqubo yokusebenza yeapile eyi ESTA. Eyona ndiyicebisayo, kodwa zininzi ezinye, ukuze ukhuphele i-iOS kwiphepha olithembileyo.
Khuphela uguqulelo lwakho olusayiniweyo lwe-iOS ngesixhobo esixhaswayo.
Yenza ukhuphelo kwi-PC okanye kwi-Mac ngelixa i-iOS ikhuphela.
Qhagamshela isixhobo sakho se-iOS kwi-PC okanye kwi-Mac ngentambo ye-USB.
Qalisa iTunes kwaye uvule isithuba kwisixhobo esixhunyiwe.
Khetha "Buyisela i-iPad ...»Ngempuku ngelixa ubambe isitshixo se«yonke into»Kwimeko ye-macOS, okanye« isitshixoukutshintsha»KwiWindows PC.
Iwindow iya kuvulwa, apho uya kukhetha i-iOS 9 .ipsw oyikhuphele ngaphambili, cofa ku "open"
Emva koko ukufakwa kuya kuqala. Ubuyisela isixhobo kwasekuqaleni ukuze kupheliswe idatha enokutsalwa kwi-iOS 10 enokuthi ichaphazele ukusebenza ngokuchanekileyo kwe-iOS 10, ubuncinci yeyona ndlela ikhuselekileyo neyona siyincomayo ukusuka apha. Nje ukuba uqale isixhobo sakho, siyakukucela ukuba usisebenzisenjengoko iya kudityaniswa kwi-ID ethile ye-Apple. Xa sigqiba inkqubo yoqwalaselo iya kusicela ukuba sibuyisele isipele ukuba sinqwenela, ulumke ukhethe eyokugqibela kwi-iOS 9 hayi le uyenzileyo kwi-iOS 10 (ukuba uyenzile), kuba eyokugqibela iya kuthi ayihambelani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ukuqwalaselwa ngaphambi kokwehliswa ukusuka kwi-iOS 10
Ukuqala kweMveliso ye-IPhone 7; ezi ziimodyuli zekhamera yakho